Akusiyo imfihlo ukuthi abandayo, isimo sezulu kunomoya kwandisa isibalo sezingane ethintekile, ikakhulukazi ibhebhetheka ngokushesha ezikoleni kanye izinkulisa, lapho kukhona omunye umntwana ukuba thimula, ngokushesha ucosha nezinye, futhi ngakho iketanga. Uma lokhu imikhuhlane, izinyane ekhononda lobuthakathaka jikelele nobuhlungu emphinjeni. Bonke abazali kufanele kwesokunxele "magic" imali - esingayenza ngaphandle kokuthi siphathe emphinjeni wengane.
Okokuqala nje, kumelwe siqonde omunye umthetho - ingane nge ogulayo ukuthi sihlale siphilile ingasaphathwa ngokuvamile kunezingane nge buthaka omzimba. Indlela esiphatha ngayo emphinjeni amaphilisi kwengane, uzama kangcono ukuze uqinise amasosha omzimba. Ukuqinisa izivikeli mzimba kumele kwenziwe kusukela basungulwa ingane, kuba ngokuya ngemibandela ethile:
- ukudla okunhlobonhlobo wengane, e imikhiqizo kufanele ibe amavithamini kanye nezinye izakhi;
- nika ingane yakho decoction rose okhalweni, okuyinto Kusizuzisa kakhulu esimisweni sokuzivikela;
- ukuvumela ingane egijima engagqoke zicathulo eyothola - ematheni wobuntu lenqwaba amaphuzu asebenzayo, ukulalela okuyinto nethonya ezuzisayo emzimbeni womuntu iyonke. ewusizo Ikakhulukazi ukuhamba phezu amatshe ulwandle futhi isihlabathi;
- ukungezwa ukudla kancane garlic, futhi kunomphumela oluqinisayo esimisweni sokuzivikela.
Uma ingane ekhononda lomphimbo obuhlungu, futhi abazali abazi ukuthi okusheshayo ikhambi emphinjeni ingane, kukhona ke amathiphu ambalwa ewusizo:
- Thatha amafutha sunflower kancane ixubene lamafutha ulwandle lalesi sihlahla uconsisele ku kid ekhaleni. Leli thuluzi ngempumelelo ikakhulukazi uma ofeza inqubo ngesikhathi izimpawu zokuqala zesifo;
- ngokungabi bikho lokushisa eliphezulu zikwazi ukuntweza imilenze ingane;
- Angicabangi ukuthi "idlanzana" amaphilisi kweso ukwelapha ingane. Esingayenza ngaphandle kokuthi siphathe ezihlukahlukene imithi emphinjeni wengane, uzama kangcono ngokuvamile ukunikeza ubisi olufudumele uju (ungakwazi ukwengeza soda kancane). Uma igciwane ukudala indawo ane-alikhali, bayakufa ngokushesha;
- Bilisa amazambane (izikhumba zabo), vumela ingane yakho ukuphefumula amazambane umusi. Umlomo ukuphefumula kufanele kube ukuba umusi eziqhutshwa njengoba kahle ngangokunokwenzeka, amboze ingane ithawula.
Uma ungazi ukuthi kufanele aphathe ingane emphinjeni, qiniseka uziqaphele izakhiwo ezinkulu ezibabazekayo ginger. Ginger yaziwa kusukela endulo ekuqukethe ocebile izakhi, kungaba ukwandisa ukumelana umzimba ezifweni ezihlukahlukene, kuyasiza ekudambiseni umphimbo obuhlungu. Futhi u-ginger izenzo njengoba isidambisa-zinhlungu, expectorant, anti-emetic. Ekhaya, Ginger ingalungiswa kanje:
- itiye kuyodingeka ucezu ginger impande noma kwengxenye isipuni ginger powder, isigamu isipuni nesinamoni kancane (ingcosana) clove. Zonke izithako kuphekwa imizuzu emihlanu amanzi kancane, ukunikeza isiphuzo kuphole kancane.
- kwelinye litre amanzi abilayo phisa eyodwa isipuni licorice (impande), ithisipuni elilodwa nesinamoni (powder), ginger (amathisipuni amabili) noma grate impande on a grater. Kwaphela imizuzu engu-10. Phuza okungenani kabili ngosuku.
Cabangela lokho ukuhahaza ingane nge imikhuhlane izifo ezibangelwa amagciwane:
- kahle usizo infusions amakhambi, kungaba calendulakuva tincture, decoction of chamomile, zikagamthilini, nezithelo raspberry leaf, Echinacea, nokuningi. Izingane ezincane ngubani abasuke bengakakwazi ukusebenzisa ukuhahaza, inqubo eyenziwa isipetu. Hlambulula umlomo wakho njalo ngehora ukuzuza umphumela;
- soda usawoti izixazululo okudambisa ubuhlungu, sisize ekuhlaleni isikhwehlela gumbi kuhlanzwe ngomlomo ingaphakathi amagciwane, khulula ukuvuvukala. Ilungiselela isixazululo we - ingilazi yamanzi abilisiwe afudumele anosawoti elilodwa noma amabili amathisipuni kasawoti uwuxube;
- Ungasebenzisa potassium permanganate, okuyinto buhlanjululwe ukuba kancane pink.
Kodwa ungakhohlwa ukuthi ingane kufanele nakanjani kumele ubonane nodokotela.
Inqubo ye nokugqumisa abafileyo. ukugqumisa umzimba morgue futhi ekhaya
DHA-S - kuyini? DHA-S, ukuhlaziywa: incazelo, emagama kanye nokusebenza
Courchevel, ke - Courchevel. Kuphi?
Sedan noma Hatchback: Yini lokukhetha?
Uyini umthwalo wemfanelo lobugebengu ukugembula?
Amaqhinga kanye namasu - yini umehluko? Uyini umehluko phakathi amacebo kusukela isu